कस्ले हाँक्ला बाँके रेडक्रस ? – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः २३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०१:१३ March 7, 2018 हातेमालो संवाददाता
नेपालगन्ज–नेपाल रेडक्रस बाँके शाखाको ३६ औं जिल्ला सभा आज हुँदैछ । गंगापुर उपशाखाको आतिथ्यमा नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ६ गंगापुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कुदरवेटवामा सभाको उद्घाटन हुने जिल्ला सभापति गोवद्र्धन सिंह सम्झनाले जानकारी दिनुभएको छ ।
जिल्लासभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकोले बाँकेका रेडक्रसकर्मीहरुले चासोका साथ हेरेका छन् । नेतृत्वको लागि अहिलेका सभापनि सम्झना र रेडक्रस बाँके शाखाका पूर्व मन्त्री अरुणलाल श्रैष्ठबीच प्रतिष्पर्धा हुनै भएको छ ।
सम्झना तेस्रो कार्यकालको लागि प्रतिष्पर्धामा आएका छन् भने श्रेष्ठ ३५ औं जिल्लासभाबाट मन्त्रीबाटै बाहिरिएकोले अहिले पहिलो पटक नेतृत्वमा दावी गर्नुभएको हो । सदस्यहरुमा सर्वसहमत भईसकेको बताईएको छ । नेतृत्वको लागिमात्रै सम्झना र श्रेष्ठ प्रचार प्रसारमा लागिरहनु भएको छ ।
जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा आर्थिक वर्ष ०७३ ÷०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा २०७५÷०७६ को वार्षिक कार्यक्रम र ०७३ ÷०७४ को आर्थिक तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुनेछ । प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा वार्षिक कार्यक्रमको वारेमा बन्दसत्रमा छलफल पछि निर्णय गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल
प्रदेश ५ मा ४ वटा पिसिआर मेशिन थप हुँदैः मुख्यमन्त्री